Cutting-Edge Technologies - CESE2 (Thailand) CO., LTD
BIM Technology Center dia manana traikefa manan-karena amin'ny fananganana maodely BIM, famolavolana ny sarin'ny fananganana amin'ny alàlan'ny fampiasana rindrambaiko BIM, ny fahitana ny fifandonana amin'ny fantsom-pitantanana sy ny fanampiana ny fametrahana sy ny fananganana eo an-toerana, mampihatra izany koa ny teknolojia BIM amin'ny fampiharana sy fitantanana ireo tetikasa lehibe , toy ny fitantanana fitaovam-panampiana, ny vinavina mialoha, ny fanahafana ny fananganana ary ny famaritana ny drafitra, ny faritra vita mialoha, manatsara be ny kalitaon'ny tetikasa.
Miaraka amin'ny fiakaran'ny teknolojia fanahafana ny solosaina, nipoitra ho toy ny teknolojia fanapahana amin'ny sehatry ny fananganana injeniera ny simulasi fizarana rivotra madio. Ny ekipa teknikan'ny CFD dia nanao fanahafana analogue momba ny fizarana rivotra isan-karazany, ny mari-pana sy ny hamandoan'ny tontolo miovaova sy mavitrika amin'ny trano madio madio amin'ny alàlan'ny fampiasana rindrambaiko CFD, ary nahavita fandrosoana sasany, manome fanohanana ara-teknika ny varotra sy ny famolavolana HVAC.
Ny fanamarinana GMP dia rohy manan-danja amin'ny orinasa mpamokatra fanafody hahazoana fahazoan-dàlana miasa aorian'ny fahavitan'ny tetikasa. Amin'ny famoahana kinova vaovao momba ny kalitaon'ny GMP sy GSP, dia nanamafy ny fifehezana sy ny fitantanana zava-mahadomelina i Shina, ary sarotra kokoa ho an'ireo orinasa mpamokatra fanafody ny manamarina ny GMP. Mba hanomezana tolotra tsara kokoa ho an'ireo ozinina fivarotam-panafody, nanangana ivon-toerana fanamarinana GMP ny orinasa hanome serivisy fanamarinana ireo ozinina fanafody, ary manampy azy ireo handroso tsara ny fanamarinana GMP.